Ku Saabsan Fayllada Shakhsiyeed ee Muuqaalka (PST)
Bogga ugu weyn > Products > DataNumen Outlook Repair > Ku Saabsan Fayllada Shakhsiyeed ee Muuqaalka (PST)
Faylka fayl shaqsiyeedka, oo lagu daray kordhinta faylka .PST, waxaa adeegsada badeecadaha isgaarsiinta ee kaladuwan ee Microsoft, oo ay kujiraan Macaamilka Microsoft Exchange, Windows Messaging iyo dhamaan noocyada Microsoft Outlook PST waa soo gaabinta "Shaxda Kaydinta Shakhsiyeed".
Wixii ku saabsan Microsoft Outlook, dhammaan walxaha, oo ay ku jiraan farriimaha boostada, galka, posts, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada howlaha, joornaalada, qoraalada, iwm waxaa lagu keydiyaa maxalliga ah faylka u dhigma .pst, kaasoo caadi ahaan ku yaal galka horay loo sii caddeeyay.
wadid: WindowsApplication DataMicrosoftOutlook
wadid: WindowsProfilesuser magacaXayeysiimaha Degaanka Codsiga DataMicrosoftOutlook
wadista: Dukumintiyada iyo magaca isticmaalehaQaybaha Degaanka Codsiga DataMicrosoftOutlook
wadid: Dukumiintiyada iyo magaca isticmaalaha Codsiga DataMicrosoftOutlook
Windows Vista ama 7, galka waa:
wadid: Magaca isticmaalaha AppDataLocalMicrosoftOutlook
Wixii Windows 8, galka waa:
wadid: Isticmaalayaasha AppDataLocalMicrosoftOutlook
wadid: Isticmaalayaasha RoamingLocalMicrosoftOutlook
Waxa kale oo aad ka raadin kartaa faylka "Outlook.pst", magaca asalka ah ee faylka 'Outlook.pst', kombuyuutarkaaga maxalliga ah si aad u hesho meesha uu ku yaal faylka.
Intaa waxaa sii dheer, waad beddeli kartaa meesha uu ku yaalo faylka PST, ama aad samayn karto keyd, ama waxaad abuuri kartaa faylal badan oo PST ah si aad ugu kaydiso waxyaabaha kala duwan.
Maaddaama dhammaan macluumaadkaaga wada xiriirka shakhsi ahaaneed iyo macluumaadkaaga ay ku keydsan yihiin faylka PST, aad ayey muhiim kuugu tahay adiga. Markay tahay ku kharribmaan sababo kala duwan awgood, waxaan kugula talinaynaa inaad isticmaasho DataNumen Outlook Repair inuu ka soo kabsado dhammaan xogta ku jirta.
Microsoft Outlook 2002 iyo qoraalkii hore waxay adeegsadaan qaab fayl PST duug ah oo leh a xadka cabirka faylka ee 2GB, oo kaliya waxay taageertaa qoraalka ANSI. Qaabkii hore ee faylka PST sidoo kale waxaa loogu yeeraa qaab ANSI PST qaab caadi ah. Laga soo bilaabo Outlook 2003, waxaa la soo saaray qaab fayl cusub oo PST ah, kaas oo taageera faylasha ilaa 20GB (xaddidan sidoo kale waa lagu kordhin karaa ilaa 33TB adoo wax ka beddelaya diiwaanka) iyo habaynta qoraalka 'Unicode'. Foomka cusub ee faylka PST waxaa lagu magacaabaa qaabka Unicode PST guud ahaan. Way sahlan tahay u beddelo faylasha PST qaabkii hore ee ANSI una beddelo qaabka cusub ee Unicode leh DataNumen Outlook Repair.
Faylka PST waxaa lagu qarin karaa erey sir ah si loo ilaaliyo macluumaadka qarsoodiga ah ee ku jira. Si kastaba ha noqotee, way fududahay in la isticmaalka DataNumen Outlook Repair inaad jebiso ilaalinta adigoon u baahnayn lambar sir ah.